Cabdisalaam X Ismaaciil oo mowqifka DPW ee Dekadda Berbera ku tilmaamay “Ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa!” – Radio Daljir
Cabdisalaam X Ismaaciil oo mowqifka DPW ee Dekadda Berbera ku tilmaamay “Ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa!”
Maarso 6, 2018 9:15 g 0
Aqoonyahan Cabdisalaam Xaaji Ismaaciil oo ah uqareeme danaha dadka iyo dalka Soomaaliya, siyaasadda dalkana lafa-gura ayaa mowqifka shirkadda DP World ee la xiriira heshiiska Dekadda Berbera ku tilmaamay “Ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa,” taas oo micneheedu yahay in shirkadda DP World ee ay leedahahay dowladda Imaaraadku ay si fudud kula wareegtay Dekadda Berbera, illaa hadana la la’yahay cid ka dhigta.
Cabdisalaam oo wareysi gaar ah siiyey Radio Daljir ayaa tibaaxay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay jawaab degdeg ah iyo in hadda kaddib laga digtoonaado galista heshiisyada noocaas oo kale ah. Cabdisalaam waxa uu intaas ku daray in arrintani ay gobolka u horseedi karto qalalaase ballaaran oo dhanka amniga iyo siyaasadda ah, ayna tahay in degdeg looga hortago.
Cabdisalaam Xaaji Ismaaciil oo ku sugan magaalada Columbus, Ohio, ee dalka Mareykanka ayaa u warramay Axmed Sh. Maxamed “Tallman.”
ARDAA Xalqaddii 46aad: Dimuqraadiyadda Puntland & nidaamka axsaabta Badan (dhegayso)